Maamulka xarunta xanaanada agoonta Jambaluul oo ka warbixiyay xaaladda xarunta (Video+Sawirro) – Radio Muqdisho
Maamulka xarunta xanaanada agoonta Jambaluul oo ka warbixiyay xaaladda xarunta (Video+Sawirro)
Maamulka Hey’adda Shabeelle Foundation iyo Wazda ayaa booqday xarunta xanaanada caruurta agoonta ee deegaanka Jambaluul ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Ujeedada kormeerka mas’uuliyiinta hey’adda Shabeelle Faoundation iyo Wazda ayaa ahaa u kuurgelidda xaaladda nololeed iyo tan waxbarasho ee caruurta ku jirta xarunta xanaanada agoonta ee Jambaluul.
Maamulaha xarunta xanaanada agoonta ee Jambabaluul ayaa warbixin ka siiyay mas’uuliyiinta hey’adda, xaalada waxbarasho ee caruurta lagu xanaaneeyo xaruntaasi.
Wuxuu tilmaamay in xarunta ay iminka ku jiraan 556 caruur agoon ah, kuwaas oo isugu jira gabdho iyo wiilal, wuxuuna intaasi raaciyay in xaruntu ay bixiso waxbarasho isugu jirta Diini, maaddi iyo tarbiyo, isagoo dhinaca kale xusay in xarunta ay ka howlgalaan 13 macalimiin ah oo aqoon durugsan u leh barbaarinta caruurta.
Xiriiriyaha guud ee hey’adda Shabeelle Foundation Mustaf Guure oo halkaasi hadal ka jeediyay ayaa sheegay in hey’addu ay gacanta ku heyso xaruntaasi islamarkaana ay bixiso dhaqaalaha ku baxa waxbaridda iyo barbaarinta caruurta ku jirta xarunta Jambaluul.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaasi raaciyay in hey’addu sidoo kale ay ka shaqeyso Beeraha, Caafimaadka, iyo waxbarashada Shabeelaha hoose.
Xiriiriyaha hey’adda Shabeelle Foundation ayaa dhinaca kale hoosta ka xariiqay iney sii kordhin doonaan taakuleynta xarunta xanaanada agoonta ee Jambaluul.
Sidoo kale xiriirayaha hey’adda Shabeelle ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed ee wax heysta iney taageero dhaqaale la soo gaaraan xarunta xanaanada caruurta agoonta ah ee Jambaluul.
Dhinaca kale madaxa hey’adda Wazda marwo Siraad Maxamed Jimcaale oo munaasabadda ka hadashay ayaa uga mahadcelisay he’adda Shabeelle Foundation mas’uuliyadda ay iska saartay xanaaneeyna caruurta ku jirta xarunta agoonta ee Jambaluul.
Waxey tilmaantay in ururkeeda isu tagga haweenka uu wax u qaban doono haweenka iyo caruurta.
Xarunta aqoonta Jambaluul oo la aas’aasay 7-06-2013 ayaa waxaa mudadaasi taakuleynayay hey’adda Shabeelle Foundation oo ka howlgasha gobolka Shabeellaha Hoose.
Safiirka Soomaaliya ee Kuwait oo saxiixay buugga tacsida “SAWIRRO”
Safiirka Soomaaliya ee Kuwait oo saxiixay buugga tacsida "SAWIRRO"